Muuri News Network » DAAWO SAWIRADA: Qaraxyadii Brussels iyo Qasaaraha oo sii kordhaya & Bayloodyada oo Argagaxsan.
DAAWO SAWIRADA: Qaraxyadii Brussels iyo Qasaaraha oo sii kordhaya & Bayloodyada oo Argagaxsan.
Waxaa maanta Qaraxyo xoogan ay gil gileen Garoon Diyaaradeed iyo xarun tareenada laga raaco oo kutaala magaalada Brussels ee dalka Belgium, waxaana qaraxyadaasi ka dhashay qasaaro xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Labo Qarax ayaa saakay ka dhacay garoonka Diyaaradaha Zaventem, waxaana qaraxyadan ku dhinttay dad gaaraya 11-qof, waxaa sidoo kale dhaawacyo kala duwan oo qaarkood halis yihiin ay soo gaareen dad kale oo badan.
Qarax kale oo aad u xoogan ayaa mar kale waxa uu ka dhacay Xarun Tareenada laga raaco oo kutaala magaalada Brussels , waxaana qaraxyadaasi ku dhintay dad gaaraya 15-qof halka ay ku dhaawacmeed dad ka badan 50-qof.
Xaalada magaalada Brussels , ayaa ah mid kacsan, waxaana gabi ahaan la joojiyay isku socodka gaadiidka Dadweynaha sida Tareenada iyo Diyaaradaha, waxaa sidoo kale aad loo adkeeyay amaanka xarumaha Dowlada.
Ra’iisul wasaaraha dalka Belgium Charles Michel, ayaa aad u canbaareeyay qaraxyadan maanta dalkiisa ka dhacay , waxa uuna sheegay in ay maanta u tahay maalin madoow, , wuxuuna dadka ugu baaqay inay deganaan iyo isku duubni muujiyaan lana shaqeeyaan ciidamada amaanka .
Dalka Belgium-ka ayaa la geliyey heerka 4-aad ee heeganka, oo ah heerka ugu sarreeya, waxaana meel kasta lasoo dhoobay ciidamo ada u badan kuwaa oo adkeenaya amaanka kana hortagaya weeraro kale oo laga cabsi qabo.